Netizen Report: Mitohy ny fitondran’i Erdogan dia mbola ho voahenjika izany ireo mpanao gazety — mpandika teny ve no manaraka? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2018 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, 繁體中文, Italiano, English
Mpanao fihetsiketsehana hitsambikina ho an'ny amin'ny kianja Taksim tamin'ny Jona 2013. Saripikan'i Mstyslav Chernov tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Raha nandeha tany amin'ny biraom-pifidianana ny mpifidy Tiorka tamin'ny 24 Jiona mba hifidy ka nandany indray ny filoha Recep Tayyip Erdogan ho amin'ny fe-potoana fahaefatra. Niomana ho amin'ny haizina ireo mampiasa aterineto.
Hatramin'ny nisehoan'ny hetsika sosialy tao Istanbul tamin'ny taona 2013 dia nobahanana matetika tao amin'ny aterineto ireo tranonkalan'ny haino aman-jery sosialy toy ny Twitter sy YouTube. Nosakanana tanteraka ny Wikipedia hatramin'ny Aprily 2017.
Fotoana fohy talohan'ny fifidianana dia nilaza ny Minisitry ny fitaterana, ny raharaha an-dranomasina ary ny fifandraisana fa hosakanan'ny fitondram-panjakana ny votoaty “tsy voajanahary” amin'ny media sosialy mandritra ny fifidianana. Nitarika ho amin'ny fanakanana tranokala bebe kokoa izany, fa mampiseho ny haavon'ny mangarahara kokoa noho ny teo aloha. Mety ho ampahany amin'ny valin'ny fanerena avy amin'ny mpanandrateny hisokafan'ny aterineto sy ireo mpikaroka ao anatiny sy ivelan'ny firenena izany.
Mbola manohy mamory ny valin'ny andrana teknika ireo mpikaroka ara-teknika ao amin'ny NetBlocks mandritra ny fifidianana. Nanamafy tamin'ny Global Voices ny NetBlocks fa nisy fahatapahan'ny herinaratra maromaro tamin'io fotoana io, ary nanery ny vodafone ny antokon'i Erdogan, ny AKP mba tsy hanome sehatra vonjimaika am-pinday amin'ny famoriam-bahoaka ataon'ny mpanohitra.
Mbola ao anatin'ny “tany misy hotakotaka manerana ny firenena” i Torkia hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny taona 2016. Na dia nokasaina hofaranana volana jolay aza ity hetsika ity dia mihevitra ireo manam-pahaizana manokana ao an-toerana fa hitohy ny ezaka ataon'ny governemanta amin'ny fanaraha-maso ny vaovao momba ny raharaham-bahoaka
Nizaka ny mafy tokoa ny tamin'ny asany hitazona ireo tompon'andraikitra tao amin'ny firenena ireo mba hanaovan'izy ireo tatitra ny mpanao gazety sy mpiaro ny zon'olombelona miatrika fanohintohinana, fisamborana sy fitoriana, miaraka amin'ireo olona nitsikera fotsiny an'i Erdogan tao amin'ny tambajotra sosialy.
Notafihina ny biraon'ny tranokalam-baovao sendika.org ao Istambul noho ny famoahana famotorana vaovao andetehana an'i Ali Ergin Demirhan, tonian'ny fanoratana izay nohazonina tamin'ny taona lasa fa hoe niezaka hilaza ho tsy ara-dalàna ny vokatry ny fitsapan-kevi-bahoaka. Nahita ireo mpikaroka momba ny sivana fa voasakana in-61 fara fahakeliny ny sendika.org hatramin'ny niforonany.
Ankoatra ireo mpanao gazety sy ireo mpiaro ny zon'olombelona malaza efa lasibatra, dia nisy sokajim-piantsehatra tsy dia mahazatra indray taratarafin'ny manam-pahefana Tiorka: ny mpandika teny.
Mihamaro hatrany ireo mpiseraseran'ny media sosialy miely any amin'ny faritra maro manerantany mavitrika amin'ny fandikana ny vaovao sy ny tatitry ny media sosialy ho an'ny mpanara-baovao. Tetikady matanjaka koa izany hampitomboana ny fanairana amin'ny zava-mitranga alefa mivantana toy ny hetsi-panoherana na fitsarana.
Tamin'ny 21 Jona dia voampanga sy voaheloka ho nanely “fampielezan-kevitra mpampihorohoro” tao amin'ny Twitter i Sebla Küçük, Tiorka mpisera media sosialy sady mpandika teny. Tsy nahitana afa-tsy fandikan-teny avy amin'ny loharanom-baovao amin'ny teny Anglisy momba ny fanafihan'ny Torkia an'i Afrin any avaratr'i Syria tamin'ny fiandohan'ny taona 2018 ireo sioka nanafintohina.
Nilaza tamin'ny tranokalam-baovao Diken i Küçük fa miahiahy izy fa ny tena antony manosika ny mpampanoa lalàna dia ny fandikantsoratra nataony tamin'ny fitsarana an'i Mehmet Hakan Atilla, mpiantsoroka taloha tao amin'ny Halkbank.
“Miharihary fa sahiran-tsaina tamin'ny fandikako an-tsoratra sy teny ny raharaha Hakan Atilla ny mpampanoa lalàna saingy tsy afa-miteny na inona na inona momba ireo izy, ary nametraka fitoriana kanefa tsy misy porofo marim-pototra”, hoy izy
Mety hamono ny aterineto ny tondrozotra vaovao mikasika ny zon'ny mpamorona any amin'ny Vondrona Eoropeana
Nahavita dingana iray hafa ny Vondrona Eoropeana manatona amin'ny fampandaniana ny fitsipika momba ny zon'ny mpanoratra, fisantaram-politika mahasahana ny faritra izay mety hampiato ny fivezivezem-baovao an-tserasera maimaim-poana any Eorôpa sy manerana izao tontolo izao.
Tamin'ny 20 Jona, nifidy ho an'io tondrozotra io ny komitin'ny vondrona eoropeana misahana ny lalàna (fitsarana), izay mitaky amin'ny sehatra lehibe toy ny Facebook hividy fahazoan-dàlana avy amin'ny haino aman-jery alohan'ny hametrahana rohin'ireo fitantarana ireo sy itadiavana “sivam-pamoahana” izay hanombantombanana ny votoaty rehetra sao misy ny fanitsakitsahana copyright mialoha ny ivoahan'izany amin'ny aterineto, fandikan-dalàna alohan'ny hahafahana mandefa aterineto. Tsy nampihemotra ireo mpitariky ny Vondrona Eoropeana ny sakana ara-teknika avo lenta ilaina amin'ny rafitra toy izany. Miaraka amin'ny Wikimedia Foundation (izay mitantana ny Wikipedia), manam-pahaizana momba ny teknolojia, manam-pahaizana momba ny politikan'ny aterineto sy mpanandra-teny ampolony no nanohitra izany politika izany.
Namaha ny fanakanana tranonkala miisa 264 i Ethiopia!
Tranokala miisa 264 izay voasivana tao Ethiopia mihoatra ny folo taona ny sasany no naverina nosokafana tamin'ity herinandro ity noho ny fangatahan'ny Praiminisitra vaovao Abiy Ahmed. Anisan'ireo naverina nosokafana, tranokalam-baovao maromaro izay misy fanakianana ny governemanta sy antoko politika izay tsy vitan'ny hoe voasivana fotsiny, fa nitarika ihany koa fisamborana mpiasan'ny haino aman-jery amam-polony tamin'ny governemanta teo aloha.
Manamafy tsikelikely ny fahefany ny governemanta vaovao taorian'ny nialan'ny Praiminisitra teo aloha Hailemariam Desalegn, izay nametra-pialàna tamin'ny volana Febroary 2018 tao anatin'ny hetsi-panoherana nieli-patrana, ny fitomboan'ny herisetra ary ny fivakisan'ny fiaraha-miasan'ny eo amin'ny samy eo amin'ny fitondrana
Tranonkala Ejipsiana voasivana raha vao sivy ora an-tserasera fotsiny
Na dia eo aza ireo sakana sy fandrahonana amin'ny fanaovan-gazety ao Ejipta, dia mbola misy olona mbola manandrana izany. Adiny sivy monja taorian'ny nandefasan'ny Tambajotra Arabo momba ny Zon'Olombelona vavahadim-baovao iray manasongadina ny fiarovana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, dia voasakana hatrany amin'ny mpanome tolotra aterineto rehetra ilay tranonkala
Tsy mihomehy amin'ny ataon'i John Oliver ny manampahefana Shinoa
Nanampy ny anaran'ilay mpanao hatsikana Amerikana John Oliver sy ny anaran'ny fampisehoana fampihomehezana nataony Last Week Tonight, amin'ny lisitry ny teny mora mahatohina ka mahatonga ny fanesorana ho azy ny hafatra amin'ny tranonkala Shinoa Weibo sy WeChat ny manampahefana Shinoa. Taoriana kelin'ny namoahan'i Oliver tamin'ny toko vao haingana ny tsikera manindrona (sady mampihomehy) sy ny tsikera momba ny famoretana ataon'ny governemanta Shinoa amin'ny resaka politika sy ara-pinoana no nitranga ilay hetsika.
Miatrika ireo fandrahonana ara-pitsarana amin'ny hafatra ataony amin'ny Facebook ny mpisera any Kambodza
Nandritra ny fanakaikezan'ny fifidianana tamin'ny 29 Jolay dia mpisera Twitter telo tao Kambodza no nentina teo anoloan'ny fitsarana taorian'ny fiampangana ho nanitsakitsaka ny lalànan'ny fanivaivana mpanjaka, izay manameloka bevava ny fanompana ny fitondram-panjaka.
Afaka manatratra ny ‘resaka rehetra’ izay mety hifandray amin'ny asa fampihorohoroana ny manampahefana Indoneziana
Manome fahafahana ny manampahefana “… hanatratra ny resaka amin'ny alàlan'ny finday na fitaovana hafa ahiahiana ho ampiasaina hanomanana, handrafetana ary hanaovana asa fampihorohoroana” ny lalàna vaovao iadiana amin'ny fampihorohoroana ao Indonezia. Maro no matahotra fa mety ho fanamarinana ny fanaraha-maso ny mpiaro ny zon'olombelona na ny mpanao gazety ny lalàna. Namoaka fanairana momba ity fepetra ity ny Human Rights Watch tamin'ny famakafakana iray natao vao haingana
Ao Indonezia ihany, voaheloka noho ny fanaparitahana lahateny feno fankahalana ao amin'ny Facebook i Alnoldy Bahari, mpanoratra boky ara-panahy, fanitsakitsahana ny Lalànan'ny Torohay sy ny Fifanakalozana nolaniana tamin'ny taona 2008 izany. Nomelohin'ny fitsarana iray any andrefan'i Java higadra dimy taon an-tranomaizina i Bahari, ary nodidiany handoa onitra 100 tapitrisa ropia (7 155 dolara amerikana). Nanameloka ity fanapahan-kevitra ity ho fanitsakitsahana ny zon'ny olona arovana (fombafombam-pitsarana) ny Amnesty International sy ny SAFEnet
Moa ve mivarotra teknolojia fitsikilovana any Torkia ny namana mpanangom-bolan'i Trump?
Tatitra avy amin'ny New York Times sy vao haingana avy ao amin'ny The Intercept no manondro fa mamorona rindrambaiko fanaraha-maso sy fitsikilovana ny orinasa Circinus tarihan'i Elliott Broidy izay mpanangom-bolan'i Donald Trump. Na dia tsy voaantoka aza ny fahamarinany dia toa natao hivarotana ny tolotra ara-teknika ho an'ny governemanta ao Torkia, Romania, Emirà Arabo Mitambatra ary Shipra ny antontan-taratasy navoaka tao amin'ny The Intercept
Mihambo ho manolotra tolotra fanaraha-maso ao an-toerana ho an'ireo polisy sy mpitantana ny fonja ihany koa ny tranonkala Circinus. Araka ny tranonkalan'ny orinasa dia ahafahana mamory, manangona sy manadihady ny fifandraisana rehetra ifanaovan'ny gadra (Skype, hafatra an-tserasera, imailaka, media sosialy) sy ahafahana manara-maso ny asa atao sy mamoaka ny lahatahiry” ireo servisy ireo
Mamandriha ny Netizen Report
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity Ellery Roberts Biddle, Mohamed ElGohary, L. Finch, Arzu Geybullayeva, Juliana Harsianti, Oiwan Lam, Mong Palatino, Karolle Rabarison, ary Sarah Myers West.